Bandhigga buugaagta ee sanadkaan oo mid kale laga gees furey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bandhigga buugaagta ee sanadkaan oo mid kale laga gees furey
La daabacay torsdag 28 september 2017 kl 10.43
Qorayaal qaadacay carwada buugaagta ee Göteborg.
Bandiga buugaagta ee sabtida laga furi doono magaalada Göteborg. sawir: Fredrik Sandberg/TT
Magaalada Göteborg ayaa waxaa maanta ka furmaya bandhigga buugaagta oo sanad walba magaaladaas lagu qabto.
Bandhigga buugaagta ee sanadkaan ayaa ku soo beegmey maalinta sabtida ee barito ay magaaladaas Göteborg mudaharaad ka dhigi doonaan urur afkaarta naziga aaminsan oo lagu magacaabo iska caabinta Nordiga.
Olav Fumarola Unsgaard oo ka mid ah dadka bandhiggaas buugaagta soo qabanqaabiyey ayaa wuxuu yiri :
-Bandhiggaan diyaarintiisa waxaanu ka soo shaqeyneyney muddo dhowr bilood ah , wax walbaana hadda waa diyaar. Qorayaasha qaarkood ayaa bandhiggaan imaan doona meesha qaar kalana ay gooba kale oo kala duwan ku sugnaan doonaan , ayuu yiri Olav Fumarola Unsgaard.
Rugta suugaanta magaalada Göteborg (Göteborgs Litteraturhus) ayaa sanadkaan bandhig gaar ah waxay ku qaban doontaa meel ka baxsan goobta lagu qabanayo bandhigga buugaagta ee sanadkaan.
Maadaama bandhigga buugaagta ee sanadkaan ay hareysey mudaharaad kooxo xagjir ahi ay magaalada Göteborg ka dhigayaan, ayaa in ka badan 200 oo qoyayaasha ka mid ahi waxay qaadaceen bandhigga buugaasta ee sanadkaan, sida lagu qorey wargeyska maalinlaha ah ee Dagens Nyheter.
Bandhiga buugaagta ee sanadkaan ayaa noqonaya kii 33-aad oo magaaladaas Göteborg lagu qabto, waxaana sanadkaan lagu soo bandhigi doonaa 3700 barnaamij oo kala duwan kuwaas oo ay soo jeedin doonaan ilaa iyo 2 000 oo qof.
Arrinka ugu weyn ee sanadkaan diiradda la saari doono ayaa ku saabsan 500 oo sano guuradii hadda ka soo wareegtey markii Martin Luther oo ah wadaad diinta kristaanka taariikh ku leh, xilligaas uu soo bandhigey qoraalkiisii uu kaniisadda katoliga uga cabanayey.
Kaniisadda dalkan Sweden ayaa iyaduna sanadkaan si mug leh uga qeyb qaadan doonta bandhigga buugaagta ee sanadkaan.
Bandhiggaan sanadlaha ah ee buugaagta ayaa qabashadiisa la bilaabey sanadkii 1985-tii.